यस्तो छ खाना खाँदा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन ? जानी राखौ
अगस्ट 13, 2019 अगस्ट 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments खाना
हामीले खाएका हरेक कुराहरुले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । खाएका वस्तुहरु धेरै मलमूत्रको रुपमा निश्कासन भए पनि त्यसको रसहरुले हाम्रो शरीर बढ्ने र शक्ति दिने गर्दछ । यही खाएको वस्तु अनुसारको नै बुद्धिको विकास हुने गर्छ । त्यसकारण बुद्धि भ्रम गराउने नशालु वस्तुहरु खानको लागि आयुर्वेद आदिमा निषेध गरिएको छ । खाना खाँदा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन ? जानी राखौ
३. आयुर्वेदमा खाना खानु भन्दा ठीक अघि, पछि र खाना खाने समयमा पानी खानु हुँदैन भनेको छ । खाना खाँदा पानी पिएमा त्यसले विषको काम गर्छ भन्ने मान्यता छ । यस कुरालाई भौतिक विज्ञानले पनि स्वीकारेको छ ।
अचारको रूपमा प्रयोग गरिने धनियाका फाइदाहरू
← औषधिको रुपमा बेलपत्रको प्रयोग
औषधीको रुपमा निमको बोक्रा र पातको प्रयोग →
2 thoughts on “खाना खाँदा के गर्नु हुन्छ र के गर्नु हुदैन ? जानी राखौ”